Francois Hollande oo ku guuleystay Doorashada madaxtinimada Faransiiska (Sawirro) | Mareeronews.com
Francois Hollande oo ku guuleystay Doorashada madaxtinimada Faransiiska (Sawirro)	Hogaamiyaha mucaaradka dalka Farnasiiska ee xisbiga hantiwadaga Francois Hollande ayaa ku guuleystey 52% halka uu madaxweynihii dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy waxa uu helay 48% wareegii labaad ee doorashada dalka Faransiiska.
Mr Hollande ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horeeyey ee ka socda xisbiga socialist tan iyo sanadkii 1995.
Hollande ayaa waxa uu u ballanqaaday shacabka reer Farance in uu ka shaqeyn doono deynta lagu leeyahay dalka Faransiiska isla markaana dhaqaalaha ka shaqeyn doono.
Taageerayaasha xisbiga hantiwadaaga ayaa waxa ay bilaabeen inay dabbaaldegeen kadib guusha ay ka gaareen doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska.
Madaxweynaha haatan ku guuleystey doorashada ayaa sidoo kale ballanqaaday in kor u qaadi doono canshuurta laga qaado shirkadaha waaweyn uuna sare u qaadi doono mushaaraadka ay qaataan shaqaalaha dowlada.
Hollande ayaa waxa uu hore u sheegay in uu shaqo siin doono illaa lixdan kun oo macalimiin cusub ah isla markaana uu hoos u dhigi doono da’ada dadku ay howlgabka ku noqdaan muddo labo sano ah.
Mr Sarkozy ayaa madaxweyne ka ahaa dalka Faransiiska tan iyo sanadkii 2007 waana markii labaad oo madaxweyne talada haya loogaga guuleysto dalka Faransiiska illaa iyo sanadkii 1958dii.
Markii ugu dambaysay ayay ahayd sanadkii 1981dii oo madaxweynihii xilligaas Valery Giscard d’Estaing uu ka guuleystey hogaamiyihii xisbiga socialistga ee Francois Mitterrand.
Madaxweynaha cusub ayaa loo dhaarin doonaa talada dalka Faransiiska dhamaadka bishan May.